Isizathu esikhulu lwemidlalo amaphutha CNC lathe ukusebenza
isikhathi Iposi: Aug-10-2018
Isizathu esikhulu lwemidlalo amaphutha CNC lathe operation Isizathu esikhulu lwemidlalo amaphutha ekusebenzeni CNC lathes wukuthi ngokunemba yokukhiqiza of Ngomdlalo ngamunye ingxenye akuyona okusezingeni eliphezulu, ukunemba ukufakwa akuyona okusezingeni eliphezulu, futhi bafake isimbembembe phakathi kokusebenza echayeke. Sesimbembembe erro ...Funda kabanzi »
CNC lathe yesondlo inkinga Servo okuphakelayo kwesistimu
1.1 Overtravel Lapho ezinyakazayo okuphakelayo idlula umkhawulo isofthiwe esabekwa isofthiwe noma umkhawulo hardware kunqunywa inkinobho umkhawulo, i-alamu overtravel kuzokwenzeka, futhi okuqukethwe alamu azoboniswa le CRT. Ngokwe CNC uhlelo manual, iphutha luqedwe. , Siphakamise ...Funda kabanzi »
amaphutha Common e CNC machining uhlelo isikhungo Servo
amaphutha Common e CNC machining isikhungo Servo uhlelo Njengoba sazi sonke, uhlelo machining isikhungo Servo uhlelo enikeza amandla ithuluzi umshini. Ngaphandle Servo uhlelo machining isikhungo, workpiece akukwazi ukucubungulwa. Ngakho-ke, uhlelo Servo kubaluleke kakhulu kule ce machining ...Funda kabanzi »
Ingabe machining izingxenye zensimbi CNC machining isikhungo esihle noma kunzima?
Okokuqala, machining yensimbi izingxenye e CNC machining izikhungo muhle komzila kanzima noma kuhle komzila. Iron izingxenye kukhona workpieces ezijwayelekile. amakhasimende amaningi bazobuza ukuthi isikhungo machining alisetshenziswa isikhungo machining ukucubungula izingxenye zensimbi. Ingabe "CNC machining isikhungo ...Funda kabanzi »
Uyini chuck Ukuhluleka CNC machining isikhungo?
1. Uyini CNC cleaner chuck? Umshini ukuncela izinkomishi, eyaziwa nangokuthi cleaner spreaders, ungomunye actuators cleaner. Ngokuvamile, ukusetshenziswa cleaner chucks ngiyothatha izihloko ingenye yezindlela nengabizi. Umshini chucks ayatholakala ezihlukahlukene izitayela. Ukuncela izinkomishi akhiwe ngerabha kungaba ...Funda kabanzi »